Raw Methenolone Acetate ntụ ntụ nke ndị na - emepụta ihe na - eweta ya - Factory
Methenolone Acetate ntụ ntụ (434-05-9)
Methenolone Acetate ntụ bụ ụbụrụ nke anabolic / injectable anabolic nke bodybuilders na-eme ka ọ dịkwuo ụbụrụ ike; gbochie mgbu anụ ma welie arụ ọrụ na ike.
Mpempe Methenolone Acetate (434-05-9) video
Raw Methenolone Acetate powder (434-05-9) Nkọwa
Raw Methenolone Acetate powder, nke a makwaara dị ka primobolan, ọ bụ etrogenic anabolic steroid nke sitere na dihydrotestosterone na a na-ahụkarị dị ka oral steroid kama nke ogwu, na-adịghị ike androgenic Njirimara. Enwere ike iji ya maka ọgwụgwọ ọrịa ọkpụkpụ ọkpụkpụ na anemia, a na - ahọrọ ya maka nrụpụta ọgwụgwọ dị elu na nrịanrịa hepatic dị ala ma e jiri ya tụnyere ndị analogs 17a-alkylated. A nabatara acetate acetate maka ọgwụ na 1961. Otú ọ dị, a na-emekarị ya na egwuregwu ndị mmadụ n'ihi ike ya nwere ike ịbawanye ike dị ka nke ọma na ịkwalite arụmọrụ na ime ihe ike. Ọ nwere ike ịmepụta arụmọrụ na-agba ọsọ.
Methenolone Acetate ntụ ntụ (434-05-9) Smmezi
Product Name Raw Methenolone Acetate ntụ ntụ
Chemical Aha NSC-74226; SH-567; SQ-16496; na-eche ihu
Klaasị ọgwụ ọjọọ Androgen; Anabolic steroid; Androgen ester
molekụla Fnhazi C22H32O3
molekụla Wasatọ 344.49
Nkịtị Monoisotopic 344.235 g / mol
Mgbu Point 138-139 Celsius
Sume DMSO: <10mg / mL
Sịkwa akwa Tigwe na -20 ° C
Antinye Dị ka onye steroid nke anabolic
Kedu ihe bụ Mpe Methenolone Acetate powder (434-05-9)?
Raw Methenolone Acetate powder, nke a makwaara dị ka primobolan, ọ bụ etrogenic anabolic steroid nke sitere na dihydrotestosterone na a na-ahụkarị dị ka oral steroid kama nke ogwu, na-adịghị ike androgenic Njirimara. Enwere ike iji ya maka ọgwụgwọ ọrịa ọkpụkpụ ọkpụkpụ na anemia, a na - ahọrọ ya maka nrụpụta ọgwụgwọ dị elu na nrịanrịa hepatic dị ala ma e jiri ya tụnyere ndị analogs 17a-alkylated. A nabatara acetate acetate maka ọgwụ na 1961. Otú ọ dị, a na-ejikarị ya eme ihe na egwuregwu ndị mmadụ n'ihi ike ya nwere ike ịbawanye ike dịka yana ịkwalite arụmọrụ na ike.
Olee otú Mpe Methenolone Acetate ntụ (434-05-9) ọrụ
Methenolone bụ ihe omimi nke DHT (ma ọ bụ iji dokwuo anya - bụ ụdị DHT). O nwere ihe jikọrọ ya abụọ na carbon otu na abụọ, nke na-enye aka mee ka ụdị hormona a dịkwuo mmiri. Ọ na-ebukwa otu 1-methyl nke na-echebe ya pụọ ​​na ntiwapụ ọrịa ahụ. Ọnụnọ nke acetate ester na-echebe ya site na ịgwọ ọrịa na-agwọ ọrịa.
Mpempe Methenolone Acetate (434-05-9) Ụdị
Oral Primobolan (Methenolone Acetate): Onye mbido Ndị ọrụ na-ahụ maka ọrụ ga-achọ 50 - 100mg kwa ụbọchị ka ha bụrụ ọgwụ dị irè site na ọnụ ọgụgụ isi. A maara ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'etiti ndị na-arụ ọrụ na-agba ọsọ na ntanetị nke 100 - 150mg kwa ụbọchị na nnukwu nsonaazụ, ndị ọkachamara ga-ahụkwa ụdị nke 150 - 200mg kwa ụbọchị iji dị irè. Di iche iche nke okwu nke Primobolan bụ otu n'ime okwu abụọ nke anabolic steroid (nke ọzọ bụ Andriol nke a na-agwa Testosterone Undecanoate okwu ọnụ) nke na-adịghị egosi ụdị hepatotoxicity ọ bụla. Ya mere, a ga-eji usoro ihe ndị dị elu nke ọnụ ọgụgụ dị elu rụọ ọrụ ma a ghaghị ịrịba ama na ọnụ ọgụgụ Primobolan ka nwere nkwụsi ike na-eguzogide metabolism na mgbaji n'ime imeju, ya mere enweghi ike eleghara ihe ize ndụ nke hepatotoxicity sitere na Primo, karịsịa dị ka A na-amụba ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke usoro okwu ọnụ gaa na elu na elu.
Ndị ọrụ ndị ọrụ na-achọ ịmepụta arụmọrụ na mmepụta ahụ nke sitere na ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ dị iche iche ga-enweta nkasi obi ma baara uru na 50 - 75mg kwa ụbọchị na obere ihe ize ndụ nke ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmụ nwa.
Mpempe Methenolone Acetate (434-05-9) uru
Primobolan (Methenolone acetate) bụ otu n'ime ndị kasị nwee mmasị na steroid n'etiti bodybuilders na ndị na-eme egwuregwu n'ihi uru dị egwu nke ga-anwụ maka. Ọ na-akọwa ọtụtụ dị ka ihe ngwọta zuru okè maka steroid cycles. Ọ bụ ihe ngwọta kachasị mma maka ndị na-eme egwuregwu na ndị bodybuilders bụ ndị dị nnọọ nhịahụ ma ọ bụ na-enwekarị nsogbu dịka imebi imeju, toxicity, na nsogbu imeju ndị ọzọ mgbe ị na-eji steroid eme ihe dị ka ọ na-enwe mmetụta dị nta na ọtụtụ uru ndị gụnyere;
Ọ na enyere aka n'ịzụlite ume na ume - ndị ọrụ nwere ike ịtụkwasị na onyinye a maka ume na ike na-aga n'ihu n'oge mgbakọ. Ọ na-arụ ọrụ site n'ikwe ka njigide nitrogen bụ akụkụ dị mkpa nke mmepụta ume.
①Nyị na-etinye aka na akwara ụlọ - nke a na-agbakwụnyekwa na njigide nitrogen. Ugbo ụlọ na-agụnye nitrogen, sitekwa n'enyemaka na njigide nitrogen, steroid na-ahapụ ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka ịzụ ọkpụkpụ ọhụrụ na ijigide ndị agadi.
②Imepụta ihe ize ndụ nke ọnọdụ catabolic - a maara na onye steroid a bụ otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe na ahịa ma ndị ọrụ agaghịzi echegbu onwe ha banyere mmeghachi omume catabolic.
③I na - eme ka ọnụọgụ nke ụda dị elu - nke a bụ nzube bụ isi; na-enyere aka na mgbapụ ọnwụ. Ọ na-enyere aka n'ịbelata ahụ dum nke anụ ahụ nke na-enye aka na-enye aka n'ime ụlọ muscle ma na-amụba ikike nke ndị ọrụ ahụ.
Zụta Methenolone Acetate ntụ ntụ si Buyaas.com
1 nyochaa maka Methenolone Acetate ntụ ntụ (434-05-9)
The ngwaahịa METHENOLONE ACETATE bụ nnọọ uru.
Raw Methenolone Enanthate ntụ ntụ (303-42-4)